Fidinana ifotony tany amin'ny seran-tsambon'i Toamasina | Primature
. Les Institutions
Fidinana ifotony tany amin’ny seran-tsambon’i Toamasina
Nidina ifotony tany amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina androany 18 aprily 2018 ny Praiminisitra, Lehiben’ny Governemanta, Mahafaly Solonandrasana Olivier, sy ireo Mpikambana sasantsasany ao amin’ny Governemanta nijery ny olana misy amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina ka nitondra vahaolana maharitra avy hatrany.
Iaraha-mahalala fa ny seranan-tsambon’i Toamasina no havokavoky ny toekarena eto Madagasikara ka raha izy no manana olana dia misy olana koa eo amin’ny toekarena malagasy. Izay no mahatonga ny governemanta tamin’ny alalan’ny Praiminisitra sy mpikambana sasantsasany ao amin’ny governemanta nidina tany an-toerana namaha ny olana. Maro ny olana izay hita, ary nisy avy hatrany ny fanapahan-kevitra noraisin’ny governemanta. Anisany olana hita ny fisian’ny kaontenera izay mahatratra hatramin’ny amin’ny roa arivo mahery ao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina. Misy ireo efa nandoavana haba fa tsy alain’ny tompony. Araka izany dia nanao antso avo amin’ny mpandraharaha izay manana kaontenera an-taonany maro ny Praiministra mba haka izany satria hisy fanapahan-kevitra horaisin’ny governemanta.
Nisy vahaolana roa izay nomen’ny Praiminisitra ka anisan’izany ny famindrana amin’ny toerana iray ireo kaontenera ireo, hatramin’ny faha 24 aprily, ka mba hahafahan’ny MICTSL (Madagascar International Container Terminal Services Ltd) manao ny asany amin’ny fampidirana entana amin’ireo fiara vaventy. Eo ihany koa ny famoahana didim-panjakana atsy ho atsy izay manambara amin’ireo mpandraharaha ireo fa raha tsy alainy amin’ny fotoana voafetra ny entana dia mety hatao lavanty na potehina, indrindra ireo efa simba. Ny tanjona dia mba hahafahana hananana toerana malalaka.
Nanamafy hatrany ny Praiminisitra, Mahafaly Solonandrasana Olivier fa “misy ny tetikasa izay miaraka amin’ny Filoham-pirenena ho fanitarana ny seranan- tsambon’i Toamasina izay ao anatin’ny telo taona no ahavitana ny asa, fa misy ny vahaolana izay azo ampiharina avy hatrany satria mila ny fiaraha miasa ny rehetra. Tafiditra ao anatin’izao hetsika izao ny ministeran’ny vola, ny indostria ary ny eo amin’ny fitaterana. ka izay no antony nahatongavan’izy ireo satria tsy maintsy ampifandrindrana ny fanapahan-kevitra raisina ary ny fanapahan-kevitra raisina androany dia manan-kery ary ny tenako dia tsy maintsy hanara-maso ny fanatanterahana azy”. Nisy ny toromarika sy baiko nomen’ny Praiminisitra ho an’ny fitondram-panjakana tany an -toerana ny hivorian’izy ireo avy hatrany mba hijerena ny fampiharana izay fanapahan-kevitra noraisina izay. Ho an’ny MICTSL dia efa nanambara izy ireo fa hohafangainana ny famoahana ny entana ato amin’ny seranan-tsambo ka maharitra eo amin’ny adiny roa ora sy sasany ny faharetan’ny famenoana ny fiara vaventy iray.
Misy koa ny olana izay mampikaikaika ny olona eo amin’ny fidiran’ny fiara vaventy ety an- toerana sy ny toerana tokony hiantsonan’izy ireo. Misy avy hatrany ny vahaolana izay noraisin’ny governemanta amin’ny toerana tokony hiantsonan’izy ireo sy ny fomba fandrindrana ny fidiran’ny fiara vaventy. Efa nanao antso avo amin’ny tomponandraikitra eto an-toerana sy ny mpitandro ny filaminana hitady ny fomba amin’ny fandrindana ny fidiran’ireo fiara vaventy ny tenako hoy hatrany ny Praiminisitra. “Mandray andraikitra ny fitondram-panjakana fa aoka samy handray ny andraikitra tandrify azy ny tsirairay na ny MICTSL na ny mpiara miombon’antoka hafa” hoy hatrany ny Tenany. Mandray andraikitra ny fitondram-panjakana toy ny amin’ny resaka fanalavana ny ora fiasana ato amin’ny seranan-tsambo. Nanao antso avo ho an’ny mpandraharaha ny Lehiben’ny governemanta ny mba “tsy hisian’ny fitarazohana amin’ny fakana ny entana indrindra ny entana efa voaloa ny haba, mba tsy hanomezan-tsiny ny fanjakana amin’ny fanapahan-kevitra izay tsy maintsy raisina fa samy haka ny entany satria samy tomponandraikitra. Tomponandraikitra ihany koa ny governemanta amin’ny fanalana ny entana ela loatra ka andraisana fepetra hentitra raha tsy esorin’ny tompony ireo kaontenera ireo.”
← Conseil du Gouvernement du Mardi 17 Avril 2018
Cérémonie d’ouverture officielle de la première édition du Salon des Ressources Humaines →
Fitokanana fotodrafitr’asa teto Port-Bergé
Présentation du Programme de Mise en Œuvre de la Politique Générale de l’Etat
Antananarivo, le 01 décembre 2018 – La Primature a été tenue au courant des actes de violence grave à l’encontre